Kaddib Shuruudihii Adkaa Ee Zidane, Manchester United Oo Isha Ku Haysa Shan Tababare Oo Kale Iyo Sida ay Uga Xumaan Doonaan Man City, Arsenal, Chelsea Iyo Tottenham – Cadalool | Shabakada Wararka Ciyaaraha
HomeWararka MaantaKaddib Shuruudihii Adkaa Ee Zidane, Manchester United Oo Isha Ku Haysa Shan Tababare Oo Kale Iyo Sida ay Uga Xumaan Doonaan Man City, Arsenal, Chelsea Iyo Tottenham
Kaddib Shuruudihii Adkaa Ee Zidane, Manchester United Oo Isha Ku Haysa Shan Tababare Oo Kale Iyo Sida ay Uga Xumaan Doonaan Man City, Arsenal, Chelsea Iyo Tottenham
Manchester United ayay ka go’an tahay inay meesha ka saarto Jose Mourinho dhamaadka xili ciyaareedkan amaba inta aanu dhamaanin xili ciyaareedkan, kaddib bandhig ciyaareed liita oo uu horyaalka ku bilaabay iyo khilaaf la kowsaday bilowga cusub ee loollanka xili ciyaareedkan.
Manchester United waxa lala xidhiidhinayaa tababarihii hore ee Real Madrid Zinedine Zidane, hase yeeshee sida ay warbaahintu baahisay waxa jira shuruudo adag oo uu tababare reer France ku xidhay inuu heshiis u saxeexo, kuwaas oo ay ku jiraan ciyaartooyo qaali ah oo ay adag tahay in si sahlan kooxahooda lagaga furfuro.
Ciyaartooyada uu doonayo Zidane waxa ka mid xiddiga reer Brazil ee PSG ay lacagta badan ka bixisay xili ciyaareedkii hore ee Neymar, Toni Kroos, Benzema, Varane iyo Griezmann, waxaana uu damacaasi u muuqdaa shuruud uu iskaga fogeynayo inuu qalinka u qaato qandaraas uu ku laylinayo Manchester United.
Arrintan ayaa waxay keentay in maamulka Manchester United ay raadiyaan tababareyaal kale oo ay u dhiibaan xilka haddii ay qancin kari waayaan Zidane, waxaana ay soo xusheen shan macallin oo aanu mid ka mid ahi waligii tababare noqonin, hase yeeshee aanay kooxaha Manchester City iyo Arsenal ku farxi doonin inuu ka hor yimaaddo isagoo Manchester United wata.
Doorashada koowaad ee Manchester United, haddii lagu hungoobo Zidane, waxa uu noqon doonaa Mauricio Pochettino oo ah macallinka Tottenham ee wakhtigan, kaas oo sida uu sheegay wargeyska Independent ay suurtogal tahay inuu aqbalo inuu horseed ka noqdo mashruuc dib loogu dhisayo Manchester United, isla markaana uu ka bixi doono Tottenham.
Shakhsiga labaad, waa tababaraha kooxda kubadda cagta Juventus oo guulo waaweyn oo horyaallada gudaha Talyaaniga ah ku hoggaamiyey Juventus. Massimiliano Allegri ayaa waxa marar badan la tibaaxay inuu kusoo jeedo horyaalka Premier League, hase yeeshee waxa uu ku negaaday naadigiisa dhibaato la’aanta ku urursada koobabka gudaha Talyaaniga, balse aan weli hantiyin Champions League.
Doorashada saddexaad ee Manchester United waxa ku jira Antonio Conte oo khilaaf xun kaddib dhawr bilood ka hor ka tegay Chelsea, waxaana suurtogal ah inuu ogolaado inuu ku laabto Premier League maadaama aanu shaqo haynin wakhtigan, isla markaana halgan la galo kooxdiisii hore ee Chelsea iyo mulkiilaheeda.
Waxa kale oo liiskan ay danaynayso Manchester United kusoo baxay tababaraha Atletico Madrid, Diego Simeone oo inkasta oo uu dhistay koox weyn oo tartamaysa haddana ay ku adkaatay inuu iska xakameeyo Real Madrid iyo Barcelona.
Qofka ugu dambeeya liiskan, waa halyeygii Arsenal iyo tababare ku-xigeenkii Manchester City ee Mikel Arteta oo xagaagii ku dhowaaday inuu noqdo tababaraha Arsenal, hase yeeshee laga doorbiday Unai Emery.
Saxeexa Arteta ayaa waxa uu ka xanaajin doonaa oo aan marnaba jeclaysan doonin taageereyaasha Arsenal iyo kuwa Manchester City, maadaama ay colaad weyn ka dhaxayso Manchester United.
Si kastaba ha ahaatee, Manchester United ayaa ugu weyn hadal-haynta saaxadda suuqa tababareyaasha.